सेरोफेरो : February 2011
* आफै त महादेव उत्तानो पर, कसले सुल्टो बनाइदियोस्
* पशुपति क्षेत्रबिकास कोषमा पैसो छ, खल्तिमेरो रित्तै
* गाँजा खाएको मान्छे, पाती देख्दा तस्रन्छ
* अरुबेला साग पखाल, शिवरात्रीमा पाप पखाल जय बाग्मती
* पशुपतिको जात्रा, गाँजाको व्यापार
* पशुपतिका भट्ट, कमरेड प्रचण्डलाई छट्ट न पट्ट
* नखाउ भने दिन भरिको शिकार, खाउँ भने गाँजाको बिकार
रुविनको सारंगी घन्के पछी
गोर्खा जिल्ला । सदरमुकामबाट एक दिन हिड्नु पर्ने गाउँ । आँपपिपल लिगलिगकोटको गन्धर्व वस्ती । त्यही बस्तीको एक फुच्चे केटो । रुवीन गन्धर्व । उमेरले पाँच वर्ष टेक्दा उ वल्लो टोल र पल्लो टोल दौडने भैसकेको थियो । बाले गाउँघरमा सारङी बजाउँदै हिड्दा उ पनि उनैसँगै ढेपिएर गीत गुन्गुनाउँथ्यो ।
काठको गुरगुरे । धूलो उडाउँदै दौडने उसलाई त्यही नै संसारको सबैभन्दा ठूलो गाडी हो भन्ने लाग्थ्यो । उसले सोचेको पनि थिएन गुरगुरे भन्दा भयंकर ठूला गाडीहरु पनि हुन्छन् जसका पाङ्ग्रा खैनीका बट्टाले हैन मोटामोटा रबरका ढड्डा बेरिएर बनेका हुन्छन् ।
बाबा आमाको कान्छो छोरो । "बा चुतुरबहादुर र आमा गोमा," कस्को छोरो होस भनेर कसैले सोधेमा फ्याट्ट यसै भन्दै खितित्त हाँस्ने उसको बानी थियो । पातलो बस्ती । मोटर नकुद्ने गाउँ । उसले सोचेको पनि थिएन एक दिन उ त्यहाँबाट घरहरुको जंगलमा पस्नेछ । लाखौं पाङग्राहरुका बीच उ पनि कुद्ने छ । उसका सारङीका आवाजसँगै गणतन्त्रका नारा चर्कने छ । अनि उसका ओठमाथि जुँगाको रेखी कोरिने बेला देशमा नयाँ संविधानको रेखा कोरिदैहुनेछ ।
हनी बावल गाउँकी हजुरआमा
ढल्कँदो उमेरले उनका कपालमा सेता मेहन्दी पस्किएर गए । ८६ वर्षले उनीसँग विदा माग्ने बेला मुहारमा निक्कै धसा्र कोरिए । आँखा चिम्सा भए । हातगोडा लुला हुन थाले । स्याङ्जा खिलुङ देउराली गाविसकी कौशिला गुरुङले चुरोटको सर्को तान्दै भनिन् 'अब बूढी भैसकेँ ।'
पातीले बारेका घर । खरले छाएका छाना । बारीभरि घैया मकै छरेका । पातलो बस्ती । इन्डियन लाहुरेसँग लगनगाँठो बाँधेर आउँदा उनका आँखामा यस्तै खिलुङ नाच्थ्यो ।
बिस्तारै बस्ती बाक्लिँदै गयो । पातीका भित्तामा ढुंगाका गाह्रा उकासिए । खरका घरले ढुंगाका स्लेट र टिनका टोपी ओढ्न थाले । झ्याम्म परेका बुटाहरु काटेर कोदो फापर सिमी र बोडी उमार्न थालियो । उनैका आँगनमा दुई छोरा र दुई छोरी हुर्किए । छोराहरु पल्टनको पेन्सन पकाएर गाउँ फर्किए । छोरीहरु अन्तै घरजम गर्न पुगे । आठ नाति-नातिना र तीन पनाति-पनातिना । सबै बुक्र्यौलाहरु उनका काखबाट ओर्लेर गाउँ चाहार्ने भैसके ।
झरी परेको दिन...
उनले छाडेर गएपछी
हरेक दिन झरी पर्यो
उनी पानीले भिजिन
म आँशुले !
सुत्ने सडक रुझ्यो
ओढ्ने आकाश भिज्यो
आज फुटपाथमा व्यापार छैन
चुल्हो चिसो छ
माया साटेर भोक मारौं !!!
रोपाइ गर्न परे
सडकमै धान छरे हुन्छ
माछा पाल्न परे
थोरै पानी परेहुन्छ
वा ! क्या सडक छ
आउनुहोस् झलकनाथ ज्यू
यसलाई पनि उद्घाटन गरे हुन्छ
भ्यालेन्टाइनमा गलफ्रेन्डलाई इमेल पठाएको कम्प्युटर नै ह्याङ भयो !
१० वर्ष पत्रमित्रता बाट प्रेम आदान प्रदान गरेँ मोरी त हुलाकीसँग पोइला गैछे !
दिनदिनै लभलेटर झ्यालबाट फाल्दिन्थेँ केटीकी आमाले पढ्दी रैछे मस्केर हैरान !
आए गलफ्रेन्ड गए गिफ्ट !
रेष्टुराँमा मोमो ख्वाएँ थुप्पा ख्वाए आखिरामा त झुसेबारुलो !
काम पाइनस छोरी लभलेटर लेख !
दुईटी गलफ्रेन्ड बनाउनेलाई रामराम भन्न सकिन्छ ततेर्न सकिन्न !
जुन गर्लफ्रेन्ड आएपनि कानै चिरेका !
गर्लफ्रेन्ड आइ गर्लफ्रेन्ड आइ फुस्स!
बाह्र छोरा तेह्र नाती हजुरआमाको आँखा लभलेटर माथी!
छन् केटी सबै मेरी छैनन केटी सबै तेरी!
खाने बेलामा घिन नसम्झनु डेटिङका बेला ऋण नसम्झनु!
बिबाहित केटी भैसी बराबर!
मुखमा रामराम बगलीमा सीता!
भ्यालेन्टाइनको जात्रा ग्रीटिङकार्डको व्यापार!
म गर्छु पिएको कुरो गर्लफ्रेन्ड गर्छे बिहेको कुरो!
प्रेम पत्र दिएँ भनेको त
घरको तरकारीको बिल परेछ
नसोध भो पछि के भो
जीउ रक्सीले टिल परेछ
म मन भरी फूल बिच्छ्याएर
उनको घर पुग्दा
त्यो त उनको माइत भैसकेछ
तैपनि यसो मन फर्कन्छ कि भनी
उनको कर्म घर गएको त
धत् त्यहाँ त उनी सुत्केरी भै रैछ